Qaraha caadiga ah | January 2020
Ugu Weyn Ee Qaraha caadiga ah
Faransiiska sheeganayo in qaraha waa cuntada malaa'igta. Berry Tani waa soo jiidasho ma aha oo kaliya dhadhan. Waa hodan fructose, folic acid, potassium, magnesium iyo fiitamiin C. Waxay ujirtaa haraadka waxayna kuugu fiicantahay dareen wanaagsan oo aad u fiican oo aad u fiican xagaaga. Ka fikir wax kasta oo ku saabsan watermelons. Sharaxaad ka mid ah qaraha iyo ka kooban Waxa jira shaki ku saabsan su'aasha: waa maxay magaca midhaha qaraha.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Qaraha caadiga ah 2020